छन्दको भिन्नै तरंग- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — पछिल्लो समय गद्य कविताको लोकप्रियता बढेसँगै छन्द कविता परम्परा संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । तर, शुक्रबार थापागाउँस्थित कुञ्ज थिएटर पुग्नेहरूले भिन्न महसुस गरे ।
टिकटमा छन्द कविता सुन्न जानेहरूको भीडले थिएटर भरिभराउ थियो भने पार्किङ र टिकट नपाएर थुप्रै साहित्य पारखीहरू पर्किए ।
थिएटरभित्र भने कविहरू रामप्रसाद ज्ञवाली, देवी नेपाल र प्रभा भट्टराईको प्रस्तुति चलिरहेको थियो । छन्द कविता सिर्जना गर्ने स्रष्टाहरू अभियान नै चलाएर नयाँ पुस्तालाई छन्द कविता सिकाउन लागिपरेका हुन् । छन्द कविताको मानकीकरणका लागि सुरु वाचन शृंखला ‘छन्द तरंग’ को पहिलो नै उत्साहप्रद रह्यो ।
नेपाली साहित्यका अग्रज प्रा. माधव पोखरेल र घनश्याम कँडेललाई अगाडि राखेर देवी नेपालले अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको ‘गुरु’ शीर्षकको कविता सुनाउँदै शृंखलाको सुरुवात गरे । देवीले कार्यक्रममा मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको ‘देश हार्दै छ आज’, ‘सुन्दर प्रकृति, सभ्य संस्कृति’, ‘परिवर्तन’ र ‘खोलाको गीत’ कविता सुनाए । उनका कवितामा सीमा अतिक्रमणदेखि देशप्रेम, प्रकृतिप्रेम, संस्कृतिप्रेम समेटिएको छ । त्यस्तै, कवि प्रभाले ‘छन्द’ शीर्षकको कवितामार्फत छन्दको महत्त्व दर्साइन् । त्यस्तै ‘छ देश नै सरापमा’, ‘नारी’, ‘नपढूँ होला भो अखबार’ र ‘आमा’ शीर्षकको कविता सुनाइन् ।
चौवारा छन्दको ‘शालिग्राम’ कविता वाचनमा रामप्रसाद सुनाउँदै थिए, ‘खप्दै सास्ती कत्ति नआत्ति चल्दछ नदीको जल संग्राम ठक्कर खाँदै खिइँदै जाँदै बन्दछ चिल्लो शालिग्राम...’त्यसपछि उनले ‘स्वाभिमान यदि छ भने’, ‘भाइबहिनीहरूलाई चिठी’, ‘शान्ति त्यसै हुँदैन’ र ‘विश्वासको प्रश्न छ’ कविता सुनाए । कविता सुनिसकेपछि प्रा. माधव पोखरेलले पहिले छन्दका कवितामा कल्पनाका कुराहरू मात्रै आउने गरेकोमा अहिले भने वर्तमान जिन्दगीको कुराहरू आउन थालेको टिप्पणी गरे ।
‘समाज परिवर्तनका लागि प्रगतिशील कविताका साथै विसंगतिहरूमाथि चोटिलो व्यंग्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर छन्द कवितामा नारा लेख्नुहुन्न ।’ उनले छन्दमा एउटा श्लोक लेख्नै धेरै समय लाग्ने भएकाले कविमा थुप्रै शब्द र भाषाको ज्ञान हुनुका साथै त्यसलाई प्रसंगअनुसार मिलाउन जान्ने खुबी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:०५
काठमाडौँ — बीपी कोइरालाको १०५ औं जन्मजयन्ती अवसरमा शुक्रबार दुई व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको छ । साहित्यकार एवं पत्रकार रोचक घिमिरेलाई बीपी साहित्य सम्मान र नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलालाई बीपी प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान दिइयो ।
जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टका तर्फबाट पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले सम्मानित दुवैलाई नगद र ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरे । घिमिरेलाई एक लाख र बाँस्तोलालाई ५० हजार रुपैयाँसहितको सम्मान दिइयो । बिरामी बाँस्तोलाकी पत्नी कुसुमले सम्मान थापिन् । आफूहरूको सम्मान स्विकारिदिएकोमा ट्रस्टका उपाध्यक्ष्य बलदेव शर्मा मजगैयाले धन्यवाद दिए ।
समारोहमा साहित्यकार घिमिरेबारे प्रा. अभि सुवेदी र नेता बाँस्तोलाबारे पत्रकार हरिहर विरहीले व्यक्तित्व चित्रण गरेका थिए । प्रा. सुवेदीले साहित्यकार घिमिरेलाई कोरा साहित्यिक साधकका रूपमा परिचित गराए । पञ्चायतकालमा लेखक वर्गलाई प्लेटफर्म निर्माण गरिदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग रहेको जस उनले घिमिरेलाई दिए ।
वक्ताद्वयले सम्मानित व्यक्तिहरूको बीपीसँगको सम्बन्ध पनि उजागर गरिदिए । बीपीका ज्वाइँसमेत रहेका बाँस्तोला बनारस छँदा नै उनीसँग निकट रहेको पत्रकार विरहीले अवगत गराए । ‘बीपीकी भान्जीसँग उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो,’ विरहीले भने, ‘तर, पहिली श्रीमतीको असामयिक निधन भयो । उहाँ राजनीतिकर्मी मात्र नभएर असल साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिले त्यो प्रतिभा ओझेल पारिदियो ।’
राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरेर बीपीका सिद्धान्त र विचार दबाउन खोज्दा साहित्यकार घिमिरेहरूले प्रजातन्त्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको प्रा. सुवेदीले बताए । ‘उहाँले त्यो बेला अभिव्यक्तिको माध्यम रचना गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वात्मक समयमा एउटा साहित्यिक वर्ग प्लेटफर्मको खोजीमा थियो जुन उहाँले निर्माण गरिदिनुभयो ।’
ट्रस्टले बीपीका कृतिबाट प्राप्त रोयल्टी रकममा थपथाप गरेर विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दै आएको कार्यक्रममा बताइयो । गत वर्ष प्रा. अभि सुवेदी र तीर्थराज ज्ञवालीलाई क्रमश: साहित्य र सेनानी सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।